Itoobiya oo shaacisay tirada Askarta ka joogta Soomaaliya – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Itoobiya oo shaacisay tirada Askarta ka joogta Soomaaliya
Ardaan Yare 9 December 2019
Dowladda Federaalka ah ee Itoobiya ayaa sheegtay tirada Ciidamadeeda ku jira gudaha Soomaaliya ee dagaalka kula jira dhaq dhaqaaqa AL-shabaab.
Danjiraha Dalka Itoobiya ee Kenya Meles Alem, oo wareysi dheer siiyay wargeyska The Star ee ka soo baxa Dalka Kenya ayaa kaga hadlay sida ay Itoobiya uga suuragashay in ay Kenya kaga wanaagsanaato ka hortagga weerarrada argagixisada.
Meles Alem, ayaa sheegay in Ciidamada Itoobiya eek u jira gudaha Soomaaliya ay tiradooda u dhaxeyso 9,000 ilaa 15,000 oo Askari kuwaas oo qaabilsan qeybta 3aad ee AMISOM oo ka kooban Gobollada kala ah Baay,Bakool iyo Gedo.
Ciidamada Itoobiya waxaa sidoo kale ay qeybkayihiin qeybta 4aad ee AMISOM oo ah Gobollada Hiiraan iyo Galguduud,waxaana ay joogaan Magaalooyinka Dhuusamareeb iyo Beledweyne.
Kenya Ciidamada ka jooga Soomaaliya waxaa lagu sheegay 2,500 ilaa 4000 oo Askari,waxaa ay ka howlgalaan Gobollada Jubada hoose , Jubada dhexe iyo Gedo,waxaana loogu yeeraa qeybta 2aad ee AMISOM.
Meles Alem, ayaa sheegay in intii u dhaxeysay 2013 ilaa 2017 ay Itoobiya ka dhaceen 46 dhacdo la xiriirta argagixisanimo ayna ku dhinteen 361 qof kuna dhaawacmeen 160 qof oo kale.
Halka Kenya isla xilligaas ka dhaceen 373weerar argagixiso oo ay ku dhinteen 929 qof kuna dhaawacmeen 1,149 qof iyada oo sidoo kale la afduubtay 666 qof.
Danjire Males ayaa sheegay in sababta ay Itoobiya ugu yaryihiin Weerarrada AL-shabaab tahay iyada oo dagaalka ka dhanka ah waxa loogu yeero argagixisada billowday 1980kii ilaa 1990kii islamarkaana qibrad wanaagsan u leedahay marka loo eego dalalka deriska la ah Soomaaliya sida Kenya oo kale.
Alem ayaa xusay in qofka Itoobiyaanka ah uusan kaliya ogeyn Albaabka ku dheggan qofka deggan ee uu xitaa ogyahay xaafadda uu degganyahay dadka ku nool iyo wixii ku soo kordha taas oo ka dhalatay wacyi gelin bulshada loo sameeya si dhowna ula shaqeeyaan hay’adaha amaanka.
Taliyaha Booliska Nugaal oo shaqadiisii dib loogu fasaxay
Askari dilay Haweeney Ganacsato aheyd oo xukun lagu riday